Fikradda Software-ka ee Taxanaha 7 waxay taageertaa Cabbiraadda Sonkorta Dhiiga | Waxaan ka socdaa mac
Fikradda barnaamijka ee Taxanaha 7 ee taageera cabbiraadda sonkorta dhiigga
Gabi ahaanba ma wada cadeynno in Apple ay bilaabi doonto taxane taxane ah oo ah 'Apple Watch Series 7' sanadkaan iyada oo awood u leh in ay cabirto gulukoosta dhiigga, laakiin tani maahan sababta aan u seegi doonno fikradan lagu arkay webka 9to5mac taas oo na tusi sida ay software-ka saacaddu u ekaan karaan, maahan qalabka.
Waana iyada oo dareenkan aan horey u faallaynay in Apple ay lahaan lahayd waxyaabo aad u adag oo ku saabsan hirgelinta dareemahan saacadda adigoon ogeyn waa jaajuus yar, waxaan usoconaa wixii weligood laqabtay ama aan iswaafaqsaneyn aaladaha lagu beero jirka si loo sameeyo cabirradan.
Si kastaba ha noqotee, dhexdhexaadintan caanka ah waxay na siinayaan habka ay Apple ugu hirgelin karto kormeerka macluumaadka ee saacadda lafteeda. Xaaladdan oo kale, waxay umuuqataa runti inay la mid tahay kuwa aan horey u haysannay, sida oksijiinta dhiigga ku jirta, neefsashada iyo wixii la mid ah, laakiin shaqadan hal-abuurnimada leh. Macluumaadka waxaa si cad oo qeexan loogu soo bandhigayaa shaashadda saacadda iyadoo la adeegsanayo fikradda barnaamijkan waana hubaal haddii Cupertino ay maareeyaan inay hirgeliyaan shaqadan, iibinta saacadda horeba caanku u ahayd way badin doontaa wax badan.
Xaqiiqdii waa fure in Apple dhab ahaantii hesho qalabka saxda ah Tan darteed, iyo la'aanteed, barnaamijka ama sawirrada fikradda ah ee ay abuureen warbaahintan caanka ah ayaa faa'iido lahayn. Sikastaba xaalku ha ahaadee, ma jiraan baaritaano rasmi ah oo ka digaya shaqadan sidaa darteed waa inaan feejignaano maalmaha soo socda hadii ay dhacdo faahfaahin dheeri ah ama xogo soo if baxayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Fikradda barnaamijka ee Taxanaha 7 ee taageera cabbiraadda sonkorta dhiigga
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 14.4, watchOS 7.3 iyo tvOS 14.4
Nooca labaad ee RC ee macOS Big Sur 11.2